IP66 ရေစိုခံအပြင်ဘက်ရှိအားလုံးသည်အာရုံခံကိရိယာပါ ၀ င်သည့်နေရောင်ခြည်သုံးလမ်းမီး 60w 80w တွင်ရှိသည်
IP66 ရေစိုခံအပြင်ဘက်ရှိအဆောက်အ ဦး အားလုံးပေါင်းစည်းထားသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းမီး ၂ ဝလုံးတွင်လှုပ်ရှားမှုအာရုံခံကိရိယာပါ ၀ င်သော 60w 80w နှင့် Yichuang မူပိုင်ခွင့်သည်ပေါင်းစည်းထားသောနေရောင်ခြည်သုံးအလင်းအိမ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုအာရုံခံကိရိယာ။, စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း, စူပါတောက်ပ LED ပုတီး, Die- casted လူမီနီယံဆီမီးခွက်အိမ်ရာ, ရေစိုခံ, anticorrosive, ပိုးသတ်ဆေး, မြင့်မားသောစွမ်းရည် lithium ဘက်ထရီ, နက်ရှိုင်းစွာသံသရာနှင့်ရှည်လျားသောသက်တမ်း ... [template id ="437"] နေရောင်ခြည်သုံးပစ္စည်းများ…
အဝေးမှထိန်းချုပ်ထားသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းမီးများတွင်နေရောင်ခြည်သုံးမီးအလင်းရောင်အပြင်ဘက် ၃၀ နာရီ
အဝေးမှထိန်းချုပ်ထားသောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းမီးများ LED နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Panel Street Light Outdoor 30w Promotional 30w ဘက်ပေါင်းစုံနေရောင်ခြည်သုံးအလင်းအိမ်, အတွင်းဘက်ထရီ, အလင်းအားအဝေးထိန်းခလုတ်ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်, တပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်. ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်မှတ်ချက်အလင်းရောင်ပါဝါ 30W စံလီသီယမ်ဘက်ထရီပမာဏ ၃.၂ ဗ 25 ၂၅AH လီသီယမ်ဘက်ထရီနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကို 30W Poly ဗို့အား 3.2V / …
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Auto Intensity Control ဖြင့်တရုတ်စက်ရုံရှိဆိုလာစွမ်းအင်သုံးလမ်းမီး
တရုတ်စက်ရုံကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Led လမ်းမီးကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသော 50w / 100w ခွဲထားသောနေရောင်ခြည်သုံးအလင်းရောင်နှင့်အတူအလိုအလျောက်ပြင်းထန်သောထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကို, လီသီယမ်ဘက်ထရီနှင့် LED မီးလုံးသည်အမှီအခိုကင်းကြသည်, မြင့်မားသောစွမ်းရည်, အလွန်အလင်းရောင်, သင့်လျော်သောအဆင့်မြင့်အစိုးရစီမံကိန်း. item သတ်မှတ်ချက်အလင်းပါဝါ 50W မှတ်ချက် / 100w စံလီသီယမ်ဘက်ထရီပါဝါ…